Ducada Hurdo La'aanta Iyo Soo Jeedka - Daryeel Magazine
Ducada Hurdo La’aanta Iyo Soo Jeedka
Wuxuu leeyayahay asxaabiga la yiraahdo zayb binu thaabit RC Nebigii Ilaahay ayaan u sheegtay oo cabasho u gudbiyay anigoo ka cabanaya soo jeed igu dhacay oo habeenkii oo dhan waan galgalanayaa oo hurdadii baan raadinayaa, hurdo ma helayo.
Markaas ayuu nebigu baray ducadii uu akhrisan lahaa ee uu uga bogsan lahaa cilladaas ama xanuunkaas.
Ilaahow xidigihii waa dhaceen, indhihiina waa xasileen oo dadkii oo dhan waa hurdeen, adiguna Allihii nool oo u qumaya adduunkaan ayaad tahay. Gamaanyo kuma qabato iyo lulmo, hurdadana kuma qabato, Allaha noolow, oo u taagan koonkan dhanow, Habeenkeyga ilaahow xasili oo deji, ishaydana ilaahow seexii.
Asxaabiga Zayd ibnu Thaabit RC waxa uu yiri markaan ducadaan akhriyay Ilaahey wuxuu iga qaaday hurdo la’aantii iyo soo jeedkii.
Ducada La Akhristo Xilliga Afurka 4 Calaamadood Oo Ku Tusinaya Inaad U Baahan Tahay Hurdo Iyo Nasasho Badan Adeeg Cusub Oo Lagu Soo Kordhiyay Taleefoonada Casriga Ah Oo Qofka Ka Caawinaya In Aanu Ku Hurdo Seegin Ducada Uurka iyo Foosha